व्याँस गाउँपालिकाद्वारा मुटु, मृगौला र क्यान्सर रोगबाट पीडितलाई आर्थिक सहयोग
यस आर्थिक वर्षमा रु. ५ लाख रुपैँया विनियोजन
मुकेश बहादुर पाल, दार्चुला, २२ श्रावण । दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिकाले एक वर्षको अवधिमा १४ जना गम्भीर खालका विरामीहरुलाई आर्थिक सहयोग गरेको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा गाउँपालिका भित्र रहेका १४ जना मुटु, मृगौला र क्यान्सर पीडितलाई जनही रु. ५० हजारका दरले स्वास्थ्य उपचारका लागि सहयोग उपलब्ध गराएको व्याँस गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत रामदत्त जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
आर्र्थिक अनुदान उपलब्ध गराएका मध्ये सबैभन्दा बढी क्यान्सर रोगबाट पीडित रहेको उहाँको भनाई छ । व्याँस गाउँपालिकाले जटिल रोग लागेका विरामीहरुलाई आर्थिक अनुदान दिने बारे कार्यविधि निर्माण गरेको छ । सोही कार्यविधि अनुसार गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशीको भनाई छ । आर्थिक अनुदान पाएका सबै विरामीहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, गाउपालिकाको सानो सहयोगले समेत विरामीहरुलाई ठुलो राहत मिल्छ, उहाँले भन्नुभयो ।
आर्थिक विपन्नता, पहुँचमा कमी तथा जटील रोगबाट पीडितहरुले केही मात्रामा भए पनि स्थानीय सरकारको अनुभुती गरेको उहाको दावी छ । चालु आर्थिक वर्षमा समेत गाउँपालिकाले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा गम्भीर रोग लागेका विरामीहरुलाई आर्थिक सहायताका लागी जम्मा रु. ५ लाख रुपैँया विनियोजन गरेको व्याँस गाउँपालिकाले जनाएको छ ।